San José kuenda kuReno-Tahoe nendege kuSouthwest Airlines kutangazve
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » San José kuenda kuReno-Tahoe nendege kuSouthwest Airlines kutangazve
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Maodzanyemba akadziva kumadokero kweAirlines akambomisa basa pakati peSan José neReno muna Kubvumbi 2020 nekuda kweiyo COVID-19 denda pamwe nekuderera kwekufamba kwakabatana.
Southwest Airlines inotangazve seSan Jose-Reno sevhisi.
San Jose-Reno sevhisi inomhanya zuva nezuva.
San Jose Airport inoda kufukidza kumeso kune vese vanofamba pane airport nendege.
Kutanga nhasi, Southwest Airlines iri kutangazve basa rayo rezuva nezuva risingamire pakati paNorman Y. Mineta San José International Airport (SJC) neReno-Tahoe International Airport.
Ndege yezuva nezuva inoenda kuSan José panguva dzakasiyana siyana muvhiki rese Boeing Ndege 737, inosvika muReno, Nevada mangwanani kusvika mangwanani masikati nguva yakatarwa.
Guta Pair zuva Kuenda Kusvika maitikiro
kuna Reno Svondo 8: 45 am Approx.
9: 45 am mazuva ose
Muvhuro / China / Chishanu 8: 00 am Approx.
9: 00 am mazuva ose
Chipiri / Chitatu 7: 30 am Approx.
8: 30 am mazuva ose
Mugovera 11: 00 am Approx.
12: 00 pm mazuva ose
Southwest Airlines yakambomiswa basa pakati peSan José neReno muna Kubvumbi 2020 nekuda kweiyo COVID-19 denda pamwe nekuderera kwekufamba kwakaderera.
SJC ichiri kuda kufukidza kumeso kune vese vanofamba nendege zvivakwa uye nendege, izvo zvinotemerwa neTransported Security Administration kusvika Ndira 18, 2022. kugeza uye / kana kushambidza maoko kazhinji, uye kugara pamba kana uchirwara uye uchidzivirira kufamba.